Abenzi base China i-KZ Series Petrochemical Process yoPapasho lweeNkcazo kunye nabathengisi | KAIQUAN
Olu luhlu lweempompo zikulungele ukuhambisa ulwelo olucocekileyo okanye olungenakungcoliseka ngokungathathi hlangothi okanye ulwelo olonakalisayo ngaphandle kweengqungquthela eziqinileyo. Le mpompo yoluhlu isetyenziselwa ukucoca ioyile, ishishini lepetrochemical, ishishini leekhemikhali, ukwenziwa kwamalahle, ishishini lephepha, ishishini lolwandle,
imboni yamandla, ukutya njalo njalo.
INtloko H: 4 ~ 230m
Uxinzelelo lomsebenzi (p): Elona xabiso liphezulu linokuba yi-7.5MPa.
Ubushushu bomsebenzi (t): -45 ~ + 400
I-API610 th8 / th9 / th10 / th11 yoyilo esemgangathweni
Olu luhlu lweempompo zikulungele ukuhambisa icocekile okanye kancinci ukungcola cala okanye kancinci Ulwelo olonakalisayo ngaphandle kweengqungquthela eziqinileyo. Le mpompo yochungechunge isetyenziselwa ukucoca ioyile, ishishini petrochemical, ishishini imichiza, processing amalahle, ishishini iphepha, ishishini ulwandle, ishishini lamandla, ukutya, ikhemesti, ukhuselo lwendalo njalo njalo.
Impompo ye-KZA petrochemical centrifugal yenkqubo ihambelana nomgangatho we-AOI610 ke kukho izinto ezingezantsi:
1) Isakhiwo sempompo sithembekile kwaye sikhuselekile kwaye ukusebenza kwempompo kuzinzile.
2) Ukusebenza kwepompo kwi-avareji iphezulu ngokulondolozwa kwamandla asezantsi.
3) Impompo yokusebenza kweempompo zilungile kwaye zingcono kakhulu kuneemveliso ezifanayo. Ixabiso elincinci le-cavitation linokuba yi-0.5m yeemveliso ezininzi, okwangoku, ixabiso le-NPSHr yemveliso ngokubanzi imalunga ne-1m. I-NPSHr esezantsi ithetha ukufakwa kwempompo esezantsi ukwenzela ukuba impompo ye-KZA ithethe iindleko zokwakha ezingaphantsi.
I-4) Uluhlu lokusebenza lwempompo lubanzi kwaye ubuninzi bomthamo unokuba yi-3000m3 / h kwaye intloko ephezulu inokuba yi-230m, okwangoku, amandla empompo kunye neentloko zecave zivaliwe ukuze kube lula ukukhetha impompo.
I-5) Zintathu iifom zokutholisa ukupholisa, ukupholisa umoya, ukupholisa fan kunye nokupholisa amanzi ngokungqinelana nobushushu bomsebenzi ohlukeneyo. Ukupholisa ifeni kufanelekile kwiindawo ezinamanzi acocekileyo.
6) Ukumiswa kunye neyunivesithi kuphezulu. Ngaphandle kwezinto eziqhelekileyo eziqhelekileyo, i-impeller kunye nomzimba ophetheyo we-KZA kunye ne-KZE unokutshintshiselana.
I-7) Impompo yezinto ezimanzi ezikhethiweyo zikhethwe kumgangatho we-API ngokwemeko yomsebenzi okanye kubathengi.
8) Ukuvula okungafunekiyo kuyilelwe nakolu chungechunge lwempompo yeemeko zomsebenzi ezahlukeneyo.
Inkampani yethu ifumene isitifiketi somgangatho we-ISO9001 kwaye kukho inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho ngexesha loyilo lwempompo kunye nenkqubo ukuze umgangatho uqinisekiswe.
Uluhlu lwentsebenzo: Umthamo Q = 0.5 ~ 3000m3 / h, iNtloko H = 4 ~ 230m
Uxinzelelo lomsebenzi (p): inokuba yi-2,5MPa (enxulumene nezinto kunye nobushushu bomsebenzi, oboniswe njengomzobo PT)
Ubushushu bomsebenzi (t): -45 ~ + 180
Isantya esiqhelekileyo (n): 2950r / min kunye ne-1475r / min
Olu luhlu lweempompo zikulungele ukuhambisa ulwelo olucocekileyo okanye olungenakungcoliseka ngokungathathi hlangothi okanye ulwelo olunokubola ngaphandle kwamasuntswana aqinileyo. Le mpompo yoluhlu isetyenziselwa ukucoca ioyile, ishishini lepetrochemical, ishishini leekhemikhali, ukwenziwa kwamalahle, ishishini lephepha, ishishini lolwandle, ishishini lamandla, ukutya, ikhemesti, ukhuselo lwendalo njalo njalo.
I-KZE, i-KZEF Petrochemcial centrifugal pump pump yenziwe ngokuhambelana ne-API610 ke kukho izinto ezithile apha ngezantsi:
Uxinzelelo lomsebenzi (p): KZE 2,5MPa KZEF 7.5MPa (enxulumene nezinto kunye nobushushu bomsebenzi, oboniswe njengomzobo PT)
Egqithileyo VCP Series nkqo Turbine Pump
Okulandelayo: Inkqubo yeCandelo leKhemikhali yoShishino lweKhemikhali